Af-Soomaali - Scofflaw Ordinance | seattle.gov
/ Home / Af-Soomaali
Barnaamijka Baabuurta Lugta [Boot] Looga Xiro: tikityada aan la bixin waxay xayiri kartaa gaarigaaga inuu socdoa
Dhibaato ha isku keenin. Tikitka ganaaxa ee laguu siyay barta gaariga [parking tickits] la dhigto waqtigii loogu talagalay ku bixi. .
Halkan ka fiiri haddii tikit lagu siiyay ama aad qabto
Buutka [boot] waa qalab lugta gaariga lagu xiro kuwaasoo looga xiro darawaliinta reer Seattle oo qaba afar tikit ama in ka badan oo ah tikatyo ganaax ah oo lacagteeda aan la bixin. Waxaa dhici karta in baabuurkaaga lagaa xiro adiga oo si sharci gaariga u dhigatay ama si sharci daro ah gaariga udhigatay. Isticmaal oo ka gal xiriiriyaha [links] dhica beddix ee bogga si aad u ogaato haddii tikit aad qabto iyo in kale, iyo sida loo bixiyo iyo waxa la sameeyo haddii gaariga lugta bir loogu xirto.
Fiidiyowga ku jira boggan internetka ka fiirso (seattle.gov/scofflaw-ordinance) si aad wax badan oo ku saabsan sida saxda ah ee gaariga loo dhigto, ama soo degso buug yaraheena oo ay ku qoran taay xogta.
Miyaa baabuurkaaga lagu dhejiyay wax warqad oo ogaysiis ah?
Axsaan ayaa laguu samaynayaa Warqad ogaysiis ah ayaa gaariga lagugu dhejinnayaa tasoo tilmaamaysa in lagugu leeyahay in ka badan 3 tikit oo bixinteeda aad kala daahday, tikityada barta gaariga la dhigto oo aadan weli bixin lacagteeda. Degmada Seattle ogaysiiskan waxay u diyaarisay dadka baabuurta wata si ay usiiso xusuus dheeraad ah ka hor inta tallaabo dheeraad ah aan laga qaadin. Ogaysiiskan waxaa kaloo dadka baabuurka iska leh ay ku wargelinaysaa in hal tikit kaliya uga dhiman yahay in gaarigooda lugta qalabka loogu xiro.
30-Maalmood Ogaysiis 30-Maalmood ah ayaa waxaa dhici karta in gaariga laguu saaro oo milkiilaha ogaysiiskan boostada loogu soo dir iyagoo lagu wargelinnayo in lagu leeyahay 4 ama in ka badan oo ah tikityo aan lacagteeda ama ganaaxa aan wei la bixin, lacagtii ganaaxa ahayd ee loo siiyay barta gaariga la dhigto. Sida waafaqsan Xeerka Dawladda Hoose ee Seattle 11.35, soddon maalmood markii ogaysiiska gaariga laguu saaray ka dib ama boostada laguugu soo diray ka dib, taargaha waxaa la gelin doonaa liiska qof sharciga iska dhega tira [Scofflaw] oo waxaad mudnaan doontaa in gaarigaaga lagu xiro qalabka lugta lagu xiro si gaariga aan loo wadin.
Qof sharciga iska dhega tira [Scofflaw] Sida waafaqsan Xeerka Dawladda Hoose ee Seattle 11.35 ogysiiska [Scofflaw] gaariga ayaa laguu saaray waxaan la socdo in gaariga lugta birta lagu xiro. Tani waxay dhacdaa goorta laguu diiwaangeliyo in lagugu leeyahay lacagta 4 ama in ka badan oo ah tikityo ganaax ah, tikityada lagu siiyay ee barta gaariga la dhigto darteed laguu siiyay oo Maxkamaddana ay milkiilaha gaariga usoo dirto ogaysiis iyada oo boostada kuugu soo dirayso ama gaariga laguu saarayo Ogaysiis 30-Maalin ah. Tilmaamo ku aadan sida aad ubixin la'hayd lacagta iyo sida looga furayo birta laguta lagu dhejiyo loo furi la'haa ogaysiiska Scofflaw ayaa la soo raacinayaa.
Ka waran haddii gaariga dhexdiisa aan dhex degannahay?
Haddii gaariga dhexdiisa aad degan tahay waxaa dhici karta in caawinnaad aad heli karto. Sidoo kale waxaa dhici karta in xaq aad u yeelato qorshe lacagta in yar-in-yar loo bixiyo. Fadlan Maxkamadda ka soo wac 206-684-5600.
Haddii aad jeceshahay in aad hesho macluumaad ku saabsan barnaamijyo kaa caawin kara in aad hesho me el ammaan ah oo gaariga aad dhegato iyo sida aad u qaadi la'hayd tallaabadii aad ku heli la'hayd hoy joogto ah fadlan soo wac Wadada aad ku heli la’hayd gGuryo aad degto [Road to Housing] oo ka soo wac 206-474-1815
Waxa la sameeyo haddii lugta baabuurka bir lagaaga xiro
HADDII BAABUURKAAGA LAGAA XIRTO SOO wac qatka bilaashka ah waa 1-877-590-3757 waxad helaysaa 24 saacadood si aad qaban-qaabin la'hayd oo aad lacagta ganaaxa ku bixin la'hayd oo birta lagu xirayna laagaga furo.
MARKA BIRTA LAGAA FURO KA DIB BIRTA KU SOO CELI mid ka mid meelahan soo socda:
Saacaddaha: Isniin - Jimco 9 AM - 5 PM,
Sabti 10 AM - 2 PM
Saacaddaha: Isniin - Jimco 10 AM - 6 PM,
S. Waa maxay qof sharciga iska dhega tira [scofflaw]?
J. Scofflaw waa qof lagu leeyahay afar ama in ka badan oo lacag ganaax ah, tikityo ganaaxa ah oo laguu siiyay barta gaariga la dhigto darteed oo gaariga laguu saaray.
S. Waa maxay Ogaysiis Axsaan ah?
J. Halkan sawir ayaa gaariga laguugu dhejinnayaa diiwaangelin tilmaamaysa 3 tikit ama in ka badan bixinteeda in aad kala daahday, tikityada barta gaariga la dhigto oo aadan weli bixin lacagteeda. Degmada Seattle ogaysiiskan waxay u diyaarisay dadka baabuurta wata si ay usiiso xusuus dheeraad ah ka hor inta tallaabo dheeraad ah aan laga qaadin. Ogaysiiskan waxaa kaloo dadka baabuurka iska leh ku wargelinayaa in hal tikit kaliya uga dhiman yahay in gaarigooda lugta qalabka loogu xiro si gaariga aan loo kaxaysan.
S. Waa maxay 30-Maalmood oo Ogaysiis ah?
J. 30-Maalmood oo Ogaysiiska ah ayaa waxaa dhici karta in gaariga laguu saaro ama lagu dhejiyo diiwaangelin tilmaamaysa in lagugu leeyahay in ka badan 3 tikit oo bixinteeda aad kala daahday, tikityada barta gaariga la dhigto oo aadan weli bixin lacagteeda. Sida waafaqsan Xeerka Dawladda Hoose ee Seattle 11.35, soddon maalmood markii ogaysiiska gaariga looga saaray ka dib ama boostada laguugu soo diray ka dib, taargaha waxaa la gelin doonaa liiska qof Sharciga iska dhega tira oo waxaad mudnaan doontaa in gaarigaaga lagu xiro qalabka lugta lagu xiro si gaariga aan loo wadin.
S. Anigu ma doonayo in gaariga bir la igaga xiro "booted," laakin maxaan ka qaban karaa oo taas aan uga hortagi karaa haddii aan bixin karin lacagta ganaaxa ee la igu leeyahay oo ah tikityada barta gaariga la dhigto darteed la ii ganaaxay?
J. Tikidyada aan weli loo gudbin shirkaddaha lacagta ururiya, waxaa dhici karta in Maxkamadda ay kuu qabanqaabiso waqti lacagta ganaaxa ee lagugu leeyahay aad ku bixinnaysid, oo ah qaab lacagta ganaaxa ee lagugu leeyahay oo muddo dheer ah aad ku bixinnayso. Haddii aad waqtiga hadda la joogo aad qaadato lacagta cayrta ah ee dowladda gobolka ay bixiso ama lacagta dowladda dhaxe ah bixiso, waxaa dhici karta in laguu diro oo ganaaxaaga laga dhigo in howl aad jaaliyadda u qabto si lacagta tikityada ee aan weli loo gudbin shirkaddaha lacagta ururiya si markaa lagaaga dhaafo. Ganaaxyada tikidyada laguu siiyay ee barta gaariga la dhigto darteed laguu siiyay, waxaa dhici karta in hay'adda Maxkamadda u qaabilsan lacag ururinta aad kala xaajooto sida aad lacagtan aayar-aayar aad u bixiso.
S: Mar haddii gaarigayga lugta birta loogu dhejiyo, ma heli karaa in Maxkamadda ay iigu qorto in jaaliyadda aan adeeg u qabto ama la ii sameeyo qorshe lacagta in yar-in-yar loo bixiyo si gaariga dib aan u helo?
J: Ma isticmaali kartid adeegga jaaliyadda loo qabto si gaariga birta lagaaga furo, laakin waxaa dhici karta in laguu qabto qorshe lacagta in yar-in yar loo bixiyo. Haddii gaariga bir lagaaga xiro, waa in aad bixisaa ganaaxyada barta gaariga la dhigto darteed laguu siiyay in loo gudbiyay shirkaddaha lacagta ururiya oo lacagta ujrada ah ee la xiriira si PayLock ama hay'adda Maxkamadda ugu qaabilsan lacag ururinta loo siiyo. Shirkadda lacagta ururisa ayaa waxaa dhici karta in aad kala xaajooto qorshe aad lacagta waqti ku bixiso adiga oo iska hormariyo lacag gaaraysa $200 ama boqolkiiba 10% oo ah lacagta ganaaxa ee lagugu leeyahay, labada inta badan. Haddii aad meel isla dhigtaan qorshe lacagta in yar-in-yar loo bixiyo oo lacagta bixinteeda aad seegto, waxaa dhici karta in gaariga mar kale lagaa xirto. Haddii markale bir lagaaga xiro, waa in aad bixisaa lacagta ganaaxa oo DHAN si birta lugta lagu xiray looga furo. Waa waqti aadan helayn qorshe lacagta in yar-in-yar loo bixiyo oo dalabkaas ma jirayo.
S. Ma jiri doonaa lacag ujra ah ee la iska qaado gaariga birta lagaaga xirtay awgeed?
J. Haa. Lacagta ujrada ah ee $145 ah waxay daboolaysaa qarashka uu soo dalaco shiradda iska leh qalabka birta ee gaariga lagu xiro iyo adeegga macaamiisha.
S. Sidee ayay Degmadu ku heshaa Qof sharciga iska dhega tira?
J. Dadka sharciga jabiya waxaa lagu aqoonsadaa gaari ay ku dhegan tahay aalad taargaha baabbuurka oo lagu aqoonsado (LPR), oo Waaxda Baliiska Degmada Seattle ay isticmaan. Nidaamyada qalabka LPR ayaa waxay awoodaan in maalintii ay aqriyaan in ka badan 10,000 oo taargo baabuur ee la dhigtay wadooyinka degmada oo waxay ku barbardhigtaa kaydka macluumaadka ee taargaha lagu aqoonsado ee qof sharciga iska dhega tira. Goorta nidaamka raadiyo oo uu soo qabto, nidaamka wuxuu ku wargeliyaa sarkaalka howsha wada, kaasoo baabuurka bir lugta uga xira ka dib markii la caddeeyo xaaladdiisa qof sharciga iska dhega tira. Nidaamka isla markaasna wuxuu xaqiijiyaa baabuurta la soo xaday.
S. Dowladda hoose ee Degmada ma xiran kartaa baabuurta haddii gaariga la dhigto dhul si gaar ah loo leeyahay ama meel baabuurta la dhigto oo si gaar ah loo leeyahay?
S: Sideen ku ogaanayaa in gaarigayga in birta lugta looga xiray?
J: Qalabka birta ah ee gaariga lugta loogu xiray waa midabka jaalaha waxaan loogu talagalay in si cad loo arko. Caadi ahaan, warqadda ogaysiiska ee muraayadda daroowalka lagu dhejiyo oo biyana aan wax ka tarayn oo cabbirkeedu ah 8.5-inji min 11-inji, oo koobi kalena waxaa muraayadda hore ayaa lagu dhejinnayaa.
S. Sidee ayaa birta lagu xiray baabuurkayga loogu furi karaa?
J. Warqadda ogeysiiska ee sheegaya in lugta gaariga bir lagu dhejiyay waxaa la socda telfoon lambar si bilaash ah oo aad soo wici kartoa PayLock 24/7 baadkiiba, PayLock waa shirkadda Degmada ee uqaabilsan. Wakiilka daryeelka macaamiisha ee PayLock ayaa lacagta kaa qaadaya ama kuu sheegi doona sida Maxkamadda aad ula xiriiri la'hayd si aad uga muranto xaaladda qof sharciga iska dhega tira ee gaariga. Birta waxaa laga furayaa goorta la bixiyo dhammaan tikityada iyo lacagaha lagugu leeyahay labixiyo, ama haddii Degmada ay go'aamiso in daroowalka uusan mas'uul ka ahyn lacagta tikityada ee aan la bixin.
S. Ka waran haddii milkiilihii hore ee gaarka iska la’haa tikityada la siiyay oo loogu dhejiyay oo milkiilaha hadda intuusan iibsan ka hor la siiyay?
J: Degmada waxay ka soo xaqiijisaa Waaxda Shatiga ee Dowladda Gobolka WA [WA State Department of Licensing] (DOL). Baabuurta lagu leeyahay afar tikit ama in kabadan oo aan lacagta la bixin kaliya, lacagta bixinteedalagala daahday ee la siiyay ka hor inta gaariga aan la wareejin birta ayaa lagu xiri doonaa. Gaariga waa la iska sii dayn doonaa iyadoon wax lacag ah aan laga qaadayn qofka milkiilaha hadda mar haddii DOL laga soo xaqiijiyo in qofka hadda gaariga iska leh uusan wax mas'uuliyad ah ku la'hayn ganaaxyada afarta ama ka badan, ee bixinta lala soo daahday.
S: Ka waran haddii taargaha aan wato Gobol Kale yahay?
J: Gaarigaaga weli waa la xiran karaa haddii lagugu leeyahay tikityo afar ama in ka badan ee Degmada Seattle lagaa siiyay.
Dadka Gobolka Washington ku cusub waxay haystaan soddon maalmood laga bilaabo taariikhda ay soo degeen oo ay gaarigooda Washington ka diiwaangeliyaan. Haddii Washington aad iska diiwaangelisay si aad uga codayso, oo Washington aad ka qaadatay lacagta cayrta ee dadwaynaha la siiyo ee barnaamijka gargaarka, ama Washington aad ka qaadatay ruqsada baabuurka ee gobolka uu bixiyo ama lacagta iskuulka lagu dhigto loo xisaabiyay qof gobolka degan, waxaa lagaaga baahan yahay in taarigada baabbuurka yahay kan gobolka baabuurkaaga ku dhegsanaado. (RCW 46.16A.140)
Qofkii gobolkan degan ee gaariga gobol kale shati uga sameeyo, sida ku qeexan xeerka RCW 46.16A.140, sidaas-awgeed uu uga cararayo in uu bixiyo wax canshuur ah ama qarashka shatiga ee lagu soo rogay taasoo la xiriira diiwaangelinta gaariga, qofkaasi waxaa dhici karta in qofkaas lagu qaado ciqaab dambi, halkan ganaax uu ka bixin la'haa sida hoos timaada qeyb-hoosaadka A ee qaybtan, ee sida soo socota:
Gefka koowaad, wuxuu mutaysan karaa ilaa seddex boqol lixdan afar (364) maalmood oo xabsi ah iyo ganaax gaaraya Shan Boqol iyo Labaatan Shan ($529) oo waxaa loo raacinnayaa qarashaad kasta ee soo raaca, loo geeyay ganaax gaaraya Hal Kun oo doolar ah ($1000) oo waxaa loo raacinnayaa wixii canshuur kasta ee aan weli lacagteeda la bixin taasoo la doonayo in la shubo sida waafaqsan xeerka RCW 46.16A.030;
Gefka labaad, wuxuu mutaysan karaa ilaa seddex boqol lixdan afar (364) maalmood oo xabsi ah iyo ganaax gaaraya Shan Boqol iyo Labaatan Shan ($529) oo waxaa loo raacinnayaa qarashaad kasta ee soo raaca, loo geeyay ganaax gaaraya Shan Kun oo doolar ah ($5000) oo waxaa loo raacinnayaa wixii canshuur kasta ee aan weli lacagteeda la bixin taasoo la doonayo in la shubo sida waafaqsan xeerka RCW 46.16A.030;
S: Haddii gaarigayga aanan weli diiwangelin, Maxkamadda aan la tago biilka kala iibsiga oo caddayn ahaan ah ma iga ogolaan doontaa caddayn ah taariikhda aan soo iibsaday?
J: Maya. Waa in aad haysataa xuquuq-la'haansha ama warbixin ku jira feelka DOL oo xaqiijinnaya waxa qofka gaariga wada uu sheeganayo inuu milkiilaha iyo taariikhda la soo iibsaday.
J: Maxay yihiin noocyada ama qaababka lacagta lagu bixin karo ee PayLock ee telfoonka lagu bixin karo? PayLock waxay qaataan karedit kaaryada, kaarka deebitka, iyo koontada bangiga loogu soo shubo.
S. Ka waran haddii lacagta karedit kaar aananku bixin karin (ama telfoonka aan ku bixin karin)?
J.Hay'adda lacagta Maxkamadda u ururiso waxay qaataan lacag naqdi ah, lacagaha [money orders], iyo jeeggaga [cashier's check]. Darawalka waa in lacagta uu keenaa inta lagu jiro saacaddaha shaqada (Isniinta ilaa iyo Jimcaha, 8 a.m ilaa 4:30 p.m.) Daaqada adeegga macaamiilka ee hay'adda lacag ururinta uqaabilsan waxay ku yaaliin dabaqa koowaad ee Maxkamadda Dawladda Hoose ee Seattle, 600 Fifth Avenue, Jeelka Deegaanka King [King County Jail] (Isniinta ilaa iyo Jimcaha, 5 ilaa 9 p.m.; Sabtiga, 9 a.m. ilaa 1 p.m.), ama waxaad ka bixin kartaa hay'adda lacag ururinta u qaabilsan ee meelo kale ku yaala iyo saacaddaha shaqada. (AllianceOne waxay xafiisyo ku leeyihiin Gig Harbor iyo degmada ama maxkamaddaha degmada Tukwila, Marysville, Kitsap County, iyo Clark County.)
S: Ka dib marka aan bixiyo lacagta la igu leeyahay, sidee birta lugta lagu xiray looga furayaa?
J: Seattle waxay isticmaashaa waxa lagu magacaabo "smart boots," kaasoo daroowalka awood u siinaya inuu iska furayo isagoo isticmaalaya lambar [code] la siiyo ee birta gaariga lagu xiro la geliyo. Darawalka lambarka waxaa siinaya wakiilka adeegga macaamiisha ee PayLock mar ala markii darwalka uu iska bixiyo lacagta tikitka ee lagu leeyahay iyo qarashka kale. Lacagaha karedit kaarka ama bangiga lagu soo wareejiyo waxaa kaa qaadaya adiga oo wici kara 24 saac maalintii, 7 maalmood todobaadkii, kaasoo suurtogelinnaya in isla daqiiqadiiba gaariga lagaa furo.
S. Ka waran haddii si ammaan ah aanan uga saari karin ama aanan qaadi karin birta lugta ku xiran?
J. Miisaanka birta lugta lagu xiro waa 16 baawunds. Shaqaalaha Waaxda Baliiska ee Seattle ayaa la soo aadiyaa dadka aan awoodin in birta ay iska furaan.
S. Mar haddii birta aan iska furo halkee ayaan ku celinnayaa?
J. Birta marka aad ka saarto ka dib, waxaad keeni kartaa meelaha la dhigo ee loogu tala galay waa in laba maalmood gudahooda laga bilaabo maalinta laga furay aad ku keentaa. Meelaha lagu celiyo waxay ku qoran tahay warqadda ogaysiiska ee gaariga laguu saaray goorta birta lagu xiray. Goobaha iyo saacaddaha waa:
24 saac maalintii, 7 maalmood todobaadkii.
24 saac maalintii, todobo maalmood todobaadkii.
Isniinta -- Jimcaha, 9 a.m. ilaa 5 p.m.
Sabti, 10 a.m. ilaa 2 p.m.
Sabti, 10 a.m. ilaa 6 p.m..
Haddii birta aad ku soo celinwaydo lama maalmood gudahooda laga bilaabo maalintii birta lugta laga furay, maalintiibwa $25 ayaa lagu ganaaxi doonaa, ilaa iyo ugu badnaan $500. Darawaliinta u yiraahda in ay ka daahi doonaan in birta ay celiyaan waxaa lagu dhiirigelinnayaa in PayLock ay telfoonka lambarka la siiyay ee ogaysiiska ku qornaa ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugula xiriiraan.
S: Ka waran haddii aan isku dayo in aan gooyo, ama jebiyo ama haddii kale aan birta ka saaro?
J: Qof kasta oo birta lugta lagu xiro wax ku sameeya waxaa dhici karta in lagu dalaco lacagta lagu beddelo oo waxaana dhici kara in dembi lagu qaado dembigaasoo ah in hantida waxyeello ugeystay (SMC 12A.08.020).
S: Maxay tahay xuquuqaha aan haysto haddii aan aamminsanahay in gaarigayga si gardarro ah birta loogu xiray ama la jiitay?
J: Qofka ku qoran gaariga ay xirteen ama ay jiiteen Degmada qofkaas 30 maalmood ayuu haystaa laga bilaabo maalinta gaariga laga furay inuu Maxkamadda Dawladda Hoose ee Seattle [Seattle Municipal Court] ka codsado in dhegaysi dacwad ah loo qabto. Qofka milkiilaha ah codsi dhegaysi ayuu qabsan karaa iyadoon la eegayn haddii qofkaas ganaaxa uu bixiyay iyo in kale. Haddii gaariga waqtiga hadda la joogo la jiitay, qofka milkiilaha dhegaysi dacwad ah in loo qabto ayuu laba maalmood ee maalmaha shaqada in lagu jiro ayuu gudahooda ayuu dalban karaa.
S: Maxay tahay ulajeedka dhegaysiga dacwadda? Ma ku qabsan karaa in tikitada la isiiyay qalad ah la igu siiyo iyo in kale?
J: Dhegaysiga dacwadda ee aad qabsanayso waa mid adiga fursad kuu siinayo in aad kala doodo haddii gaariga afar jeer ama in ka badan la ganaaxay oo tikityo ganaax lacag ah lagu leeyahay iyo in kale iyo in gaariga la xirtay ama la jiitay yahay mid waafqasan sharciga gobolka ama sharciga dowladda hoose? Dhegaysiga dacwadda MA ahan fursad aad kula doodayso tikityada kasta ee lagu siiyay, maadaama fursaddahaas horay loo soo dhaafay.
S. Maxay tahay sababta Degmada ay gaariyada sharciga jebiyay ay isaga jiidan la'hayd halka ay lugta bir ay ugu xirayaan?
J. In lugta laga furo birta lagu xiray ayaa ka raqiisan oo ka sahlan oo "wanaagsan" kuwa gaariga laga xirto. In gaariga la jiito waa mid waqti kuluma, waa mid milkiilaha dhib ku ah maadaama ay milkiilaha gaariga dhib ku noqon karto in ay aadaan halka gaariga la geeyay. Sidoo kale birta la jiitay ay milkiilayaasha gaariga ay u ogolaato in si sahlan ay ugala baxaan alaabta gaarigooda ugu jira, sida kursiga caruurta, daawooyinka loo qoray, ama warqaddo muhiim ah ee gaariga loogu tago.
Sharciga Dawladda hoose ee [City Scofflaw Ordinance]
Walxo la Daabacay
Bogga Internetka Baliiska
Bogga Internetka Maxkamadda
Barta Baabuurta la Dhigto ee Seattle ku dhex yaala: